In Muslimiinta caalamka ay xajka ka baaqdaan ma ka mid tahay caalamadaha qiyaamaha? | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo In Muslimiinta caalamka ay xajka ka baaqdaan ma ka mid tahay caalamadaha...
In Muslimiinta caalamka ay xajka ka baaqdaan ma ka mid tahay caalamadaha qiyaamaha?
Dowladda Sucuudiga ayaa markii labaad soo saartay go’aan ah in Muslimiinta ku nool daafaha caalamka aysan sannadkan xajin karin, taas oo ah tallaabo looga hortagayo faafitaanka cudurka Covid-19.
Muslimiin badan oo ku nool caalamka ayaa sannadkan isku diyaarinayay soo gudashada acmaasha xajka, ka hor inta uusan saameyn go’aanka ka soo baxay dowladda Sucuudiga.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ka codsatay dhammaan Muslimiinta ku nool daafaha dunida in ay dulqaad muujiyaan islamarkana ay dib u dhigtaan qorshahooda Xajka iyo Cumrada ee sannadkan.
Balse in Muslimiinta ku nool dunida ay labo sano isku xigto xajin waayaan waxaa ka dhashay muran badan. Dadka qaar waxay soo daliishanayaan axaadiis sheegaya in nebiga (NNKH) uu dadka faray in ay xajiyaan ka hor inta aanan laga hor istaagin xajka.
Arrintan ma waxay ka mid tahay ‘astaamaha qiyaamaha’?
Dooodda ugu badan ee arrintan la xiriirto waxay ka taagan tahay dalka Nigeria oo Muslimiin aad u badan ay ku nool yihiin.
Qaar ka mid ah culimada dalkaas ayaa go’anaka uu Sacuudiga ku mamunuucay xajka ee Karoonaha dartii, ku tilmaamay astaan muujineyso in maalinta qiyaamaha ay soo dhawdahay.
Sheekh Halliru Maraya
Sheekh Halliru Maraya oo ka mid ah culimada caanka ee Nigeria, ayaa BBC Hausa u sheegay in wax shaki ah uusan ku jirin in go’aanka Muslimiinta looga hor istaagay xajka, uu muujinayo in la joogo aakhiru-zaman.
Wuxuu intaas ku daray Sheekha in xadiiska sheegaya in nebiga (NNKH) uu dadka faray inay xajiyaan ka hor inta aanan laga mamnuucin, uu yahay mid qaar ka mid ah culimada ay ku tilmaameen in uu daciif yahay, balse hadda lagu dabaqi karo xaaladda jirta.
“Xadiiska waa mid daciif ah, balse waxaa loo adeegsan karaa xaaladaha waaweyn ee markaa dunida ka taagan iyo waxyaabaha dadka ka nixiya, gaar ahaan in acmaashaas ay gutaan,” ayuu yiri Sheekh Halliru.
Wuxuu intaas ku daray: “Caalamadaha qiyaamaha way iska cad yihiin. Ma dhici karto in Yurub oo ah halka uu sida ba’an u saameeyay cudurka ay bilaabaan in dalalkooda ay dib u furaan. Garoomada ciyaaraha ayaa isku furan, ciyaarihii ayaa socdaa. Kawarran haddii Sacuudi Carabiya, oo cudurka uusan si weyn u saameynin, uu Muslimiinta ka mamnuucayo Xajka”.
Hadda waxaan ka hadlayaa ciyaaraha koobka Yurub, kumananaan qof ayaa isugu tagey garoomada ciyaaraha, marka maxaa dadkaas loogu diidi waayay in ay kulmaan”.
“Marka, go’aanka Sacuudiga ee xajka lagu mamnuucay waa astaan muujineyso in la joogo aakhiru-zaman,” ayuu yiri Sheekh Sheekh Halliru Maraya.
Horey ma u dhacday in Muslimiinta ay Xajka aadi waayaan?
Sheikh Mansur Ibrahim Sokkoto
Sheekh Mansuur Sokoto oo ka mid ah culimada dalka Nigeria, wuxuu qabaa in Sacuudiga looga baahnaa in uu xadido tirada Muslimiinta ee caalamka ka imaanaysa halkii uu gebi ahaanba xayiraad ku soo rogi lahaa.
Wuxuu intaa ku daray in hadda ka hor ay dhacday in Muslimiinta ay xajin waayeen ka dib dhibaato koox burcad ah ay ka wadday magaalada Makah.
“Sidoo kale waxaa jirtay xilli ay fatahaado saameeyeen Makah iyo xilli Muslimiinta uu xajka ka hor istaagay dagaal dhexmaray ibnu Zubeyd iyo Yaziid Ibnu Mucaawiya”.
Sheekh Mansuur Sokoto wuxuu dhankiisa rumeysan yahay in go’aanka Muslimiinta dunida looga mamnuucay xajka uusan muujineyn in ay ka mid tahay astaamaha qiyaamaha, balse uu yahay mid looga hortaggayo safmarka sida ba’an u saameeyay dunida.
Previous articleJoe Biden: Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka
Next articleEx-wasiir Max’ud Xaashi Cabdi oo weerar qaawan oo Afka ah ku qaaday Beesha Garxajis
Deg Deg, Ciidamo kala taabacsan Rooble iyo farmajo oo dagaal ku dhexmareyo XAMAR
Afghanistan: Taalibaan oo ka hadashay Khilaafka dhex bilaabmay hogaankeeda iyadoo ragga qaarkii gacan isku la tageen
CAALIMKA Sh.C/rashiid Sh.Cali Suufi oo weedho Kaftan & Wacdi isagu jira Goroda u geliyey Weriye Catoosh
Deg Deg, Ciidamo kala taabacsan Rooble iyo farmajo oo dagaal ku...
Afghanistan: Taalibaan oo ka hadashay Khilaafka dhex bilaabmay hogaankeeda iyadoo ragga...
CAALIMKA Sh.C/rashiid Sh.Cali Suufi oo weedho Kaftan & Wacdi isagu jira...
Daawo:Xisbiga Ucid oo Distoor jebin ku sheegay wareegto Kooto loogu xidhay...
War cusub oo laga soo saaray Xaalada Caafimaad ee M/weyne Geelle...
awsiirka xananad xoolaha oo waxyabo cusub kusoo kordhiyay daweyntii xoolaha
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada S/land oo shaaciyey Liiska Guddi-hoosaadyada Golaha
Maxaey kawada hadleen gudoomiyaha barlamanka somaliland iyo safiirka UK
Nin Soomaaliya oo Dalka Talyaaniga ku tooriyeeyay 4 Qof+Sababta
Xaamid Mir: Sheekadii saxafi Pakistan u dhashay oo saddex jeer waraystay...
FBI-da oo baahisay xog cusub: Sacuudiga ma ku lug lahaayeen weeraradii...
Laascaanood oo lagu dilay nin xildhiban gole degaan ah
Soo Dhaweyntii Madaxweyne Biixi Iyo Magaalada Boorama Ee G.Awdal
Masuul Iska Casilay Kulmiye Kuna Biiray Waddani Madaxweynahana..
In Maanta Koore Lagu Yidhaahdo Halkan Gunuu Ku Joogaa Waa Shil...